Warshad iftiin LED | Shiinaha Soosaarayaasha iftiinka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Iftiinka dhalaalaya ayaa gebi ahaanba soo baxa, oo leh xagal ballaadhan oo ballaadhan. Naqshadeynta wareegga gaarka ah, si looga fogaado hal nal oo xun ayaa saameynaya saameynta guud, oo ka madax bannaan faragelinta raadiyaha, ma wasakheyn doonto deegaanka. Kaydinta tamarta, dhalaalka sare, meerkur la'aan, infrared la'aan, ULTRAVIOLET, faragelin elektromagnetic ah, saameyn kuleyl ah, shucaac la'aan, ifafaale istarooboskobiic ah. Miisaanka fudud oo si fudud loo rakibo. Ku habboon hudheelada, qolalka shirarka, warshadaha ama xafiisyada, USES-da ganacsiga, goobaha la deggan yahay ama xarumaha dadweynaha, dugsiyada iyo isbitaalada halkaasoo looga baahan yahay keydinta tamarta iyo iftiinka muujinta midab sare.
18W 40W 80W LED recessed LED SMD nal nadiif ah qolka nadiifka ah
Naqshadeynta qaabdhismeedka nalalka dhaadheer ee nadiifka ah ayaa aad u dhuuban oo u dhow saqafka. Jidhka laambadda iyo daboolka dambe ayaa laga buuxiyey cufnaanta cufnaanta sare. Boor malaha, fududaan kara in la nadiifiyo, oo aan dhalaal lahayn. Tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee semiconductor diode waxay horseed u noqotay nolosha ilaha iftiinka, mana ku jiraan meerkuri ku yaal laambadaha dhaadheer ee soo jireenka ah, oo deegaanka u wanaagsan. Isbitaalka, farmasiga, ka shaqeynta cuntada, keydinta iyo warshadaha xulashada nalalka qolka nadiifka ah. Noocyo kala duwan oo cabirka jirka ah iyo noocyada isha iftiinka waa ikhtiyaari. Waxaa loo adeegsaday heerarka 100-10000 ee munaasabadaha nadaafadda.
Biyo aan caddeyn 9W 18W 25W LED chip nooca nalka saddex-caddeyn ah
Iftiinka ayaa la kulmaya qiimeynta IP65. Biyo-la’aan, qoyaan-caddeyn, naqshad quful-caddeyn la'aan ah, qaab-dhismeed macquul ah, qurux iyo deeqsi ah, naqshad xirid badan oo saaxiibtinnimo leh, fudud oo rakibidda iyo dayactirka. Hal shumaca madaxa laydhka, 250V caag ah oo tayo sare leh oo olol celin kara, xoog farsamo sare, dhexroor iyo dherer ku kicinta nooca wareega, waxqabadka xiriirka wanaagsan. Naqshadeynta qormada, qaabdhismeedka is haysta, muuqaalka quruxda badan, fudud ee rakibidda iyo dayactirka, bilowga degdegga ah. Waxay ku habboon tahay gudaha iyo bannaanka meelaha biyuhu ka gudbaan, uumbo-diidka iyo shuruudaha uumiga ka-horjoogsanaya.
70W 100W 150W danab weyn LED iftiin mashruuc-light
Hooska iftiinka wuxuu ka samaysan yahay aluminium tayo sare leh shubista, kuleylka kuleylka waxqabadka heerkulka iftiinka wuxuu ka samaysan yahay laambado dhalaalaya oo heer sare ah, dhalaal sare, iyo adeegsi deggan. Soosaarida korantada ee joogtada ah waxaa loo dhisay si loo hubiyo in laydhku hagaago. Waxay ku habboon tahay laydh xoog leh oo gudaha ah, sida aqoon isweydaarsiga, meelaha caamka ah iyo nalal kale oo dhaadheer.
180V ~ 220VAC daawaha aluminium qabow oo duudduuban iftiinka LED-ka
Jirka iftiinka wuxuu ka samaysan yahay aluminium daawaha sax-u-dhimista, qaab-dhismeedka khafiifka ah, qaabka iftiinka iftiinka hoose, budada dusha sare ee daaweynta daaweynta, u adkaysiga daxalka. Nidaamka isticmaalka nalku wuxuu bixiyaa LEDSMB2835 iyadoo la raacayo istaandarka tamarta Mareykanka, leh suuska yar ee iftiinka iyo waxtarka iftiinka sare. Mitsubishi saxanka faafida indhaha, iftiinka jilicsan, waxtarka iftiinka sare. Taageerida qodobka awooda sare ee go'doominta joogtada ah ee korantada wadata, nidaamka naqshadeynta heerka sare, xulashada maaddada adag, tijaabinta adag, si loo hubiyo in laambaduhu u shaqeeyaan nolol deggan oo dheer. Meel lagu dabaqi karo: Xarunta farshaxanka madxafka, hoteel qurxoon, hudheel sare, hudheel ganacsi oo heer sare ah iyo nalalka furaha ee gudaha.
aluminium gusset saxan ganaax saqafkiisa LED nalka nalka nadiif ah
Iftiinka dhalaalaya ayaa gebi ahaanba soo baxa, oo leh xagal ballaadhan oo ballaadhan. Naqshadeynta wareegga gaarka ah, si looga fogaado hal nal oo xun ayaa saameynaya saameynta guud, oo ka madax bannaan faragelinta raadiyaha, ma wasakheyn doonto deegaanka. Kaydinta tamarta, dhalaalka sare, meerkur la'aan, infrared la'aan, ULTRAVIOLET, faragelin elektromagnetic ah, saameyn kuleyl ah, shucaac la'aan, ifafaale istarooboskobiic ah. Miisaanka fudud oo si fudud loo rakibo. Ku habboon hudheelada, qolalka shirarka, warshadaha ama xafiisyada, isticmaalka ganacsiga, meelaha la deggan yahay ama xarumaha dadweynaha, dugsiyada iyo isbitaalada halkaasoo looga baahan yahay keydinta tamarta iyo iftiinka muujinta midab sare.
Fasalka 1 tamarta keydinta beelka geeska LED nalka nadiifka ah
Iftiinka dhalaalaya ayaa gebi ahaanba soo baxa, oo leh xagal ballaadhan oo ballaadhan. Naqshadeynta wareegga gaarka ah, si looga fogaado hal nal oo xun ayaa saameynaya saameynta guud, oo ka madax bannaan faragelinta raadiyaha, ma wasakheyn doonto deegaanka. Kaydinta tamarta, dhalaalka sare, meerkuri la'aan, infrared la'aan, ultraviolet, faro-gal elektromagnetic ah, saameyn kuleylka ah, shucaac la'aan, ifafaale istarooboskopic ah Miisaanka fudud oo si fudud loo rakibo. Ku habboon hudheelada, qolalka shirarka, warshadaha ama xafiisyada, isticmaalka ganacsiga, meelaha la deggan yahay ama xarumaha dadweynaha, dugsiyada iyo isbitaalada halkaasoo looga baahan yahay keydinta tamarta iyo iftiinka muujinta midab sare.
Nooca 1aad ee keydinta tamarta birta birta ah ee birta ah nal nadiif ah
Iftiinka dhalaalaya ayaa gebi ahaanba soo baxa, oo leh xagal ballaadhan oo ballaadhan. Naqshadeynta wareegga gaarka ah, si looga fogaado hal nal oo xun ayaa saameynaya saameynta guud, oo ka madax bannaan faragelinta raadiyaha, ma wasakheyn doonto deegaanka. Kaydinta tamarta, dhalaalka sare, meerkuri la'aan, infrared la'aan, ultraviolet, faro-gal elektromagnetic ah, saameyn kuleylka ah, shucaac la'aan, ifafaale istarooboskopic ah Miisaanka fudud oo si fudud loo rakibo. Ku habboon hudheelada, qolalka shirarka, warshadaha ama xafiisyada, USES-da ganacsiga, goobaha la deggan yahay ama xarumaha dadweynaha, dugsiyada iyo isbitaalada halkaasoo looga baahan yahay keydinta tamarta iyo iftiinka muujinta midab sare.
Waxay isku xireysaa qaybinta iftiinka wanaagsan, luminta tamarta yar iyo xakameynta iftiinka hal iftiin si loo gaaro heer sare oo ah shuruudaha nalalka xafiiska. Waxaa lagu dhejin karaa labalaab, seddex, afar ikhtiyaar oo tuubbo ah, oo ku habboon baahiyaha kaladuwan ee qaybinta iftiinka siman, heerka soosaarka iftiinka oo ka badan 70% mug yar, oo ku habboon gaadiidka, kaydinta, rakibidda Xarafka "V" wuxuu u taagan yahay gundhig, xarafka "X" wuxuu u taagan yahay saqafka. Ku habboon dhismayaasha xafiiska, xafiisyada, suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto, qolalka sugitaanka, warshadaha, dugsiyada, isbitaalada iyo meelaha kale ee caamka ah ee gudaha.
Tamarta keydinta 150W 250W 400W iftiinka macdanta LED
Ku habboon dhirta warshadaha, suuqyada laga dukaameysto, dukaamada waaweyn, hoolka sugitaanka, hoolka sugitaanka, xarunta bandhigga, jimicsi iyo nalal kale.
Iftiinka nalka isdhexgalka ee xafiiska xafiiska, degenaanshaha, isticmaalka guud
Naqshadeynta qormada, muuqaalka quruxda badan, mug yar. Ku habboon xafiiska, guriga, nalalka ganacsiga, iwm.